zvoseVatambi Vanotamba YevatambiScottish Nhabvu VatambiWelsh Nhabvu Vatambi
Emile Smith Rowe Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Rhys Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
John McGinn Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jarrod Bowen Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Rafael Leao Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Angelino Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Alassane Plea Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Houssem Aouar Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yves Bissouma Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Boulaye Dia Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Angelo Ogbonna Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Folarin Balogun Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseVanotamba Nhabvu VanotambaVatambi veBrazil VanotambaVechidiki veCanada BhoraColumbian Nhabvu VatambiUnited States Nhabvu VatambiUruguayan Nhabvu Vatambi
Matheus Cunha Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ronald Araujo Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Raphinha Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Moises Caicedo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseOceania Nhabvu VatambiTurkish Nhabvu Vatambi
Hakan Calhanoglu Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
zvoseVatambi veClassicBhora ElitesMamaneja enhabvu
Dean Smith Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ralph Hasenhuttl Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ronald Koeman Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Ferran Torres Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Ferran Torres Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana / Wife kuva, Lifestyle, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, iyi Hupenyu Hupenyu hweSpanish nhabvu. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, ona hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana chaFerran Torres 'Bio.
Hupenyu nekusimuka kwaFerran Torres.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye ndiye mwana mutsva pane block- nyeredzi yakafara inozivikanwa yake-chiyero chebasa uye penchant yekusafungidzira, kugona, uye kutonga padhuze nekukurumidza. Nekudaro, vashoma chete vevadikani venhabvu vakafunga kuverenga Ferran Torres 'Biography. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitange.
Ferran Torres 'Yehucheche Nyaya.
Imwe yemapikicha ekutanga anozivikanwa ehudiki yaFerran Torres.
Kutanga, Ferran Torres García akazvarwa pazuva 29th raFebruary 2000 mudhorobha reFois muSpain. Iye anokunda weSpanish ndiye Mwanakomana wekutanga uye wechipiri wevana vatatu akaberekwa kuna amai nababa.
Kufanana nevarume vake vemunyika vane mukurumbira Andreas Iniesta, Xavi uye Sergio Ramos, Ferran inyanzvi yeSpanish yenyika. Muzvokwadi, akakurira kunzvimbo yaakaberekerwa muFois pamwe chete nehanzvadzi yake yakakura uye yepamwoyo shamwari yepamwoyo "Arantxa" uye mudiki anozivikanwa mwana wehama.
Yevacheche Mufananidzo waFerran Torres pamwe nasisi vake mukuru Arantxa.
Kukura paFois, Ferran aifarira nhabvu inofarira uyo aive nechinhu chekuona nhabvu paTV uye kuyedza kutevedzera hunyanzvi hwakagadzwa uyo akaona nyeredzi vatambi vachiratidzira. Dzimwe nguva aigadzirisa, dzimwe nguva aitozvikanganisa.
Vabereki vaFerran Torres vaive parutivi rwekutambira paakarova bhora zvisina kunaka. Ivo kazhinji vanokanganiswa neruzha rwekupwanya mavhasi, kupwanya magirazi uye zvidhori. Nekudaro, hapana munhu akaita chero chinhu kumutadzisa kubva pakuda kwake nhabvu uye kuda kwake kwake uye chete kirabhu inodikanwa - Valencia CF.
Akakura semutambi wenhabvu. Unogona here kufungidzira kuti ndeipi tokirabhu iri pane kapu yake? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Ferran Torres Mhuri Yechinyakare:
Semwana mudiki, vabereki vaFerran Torres vakamutsa kuda kwake nhabvu nekumuendesa kuValencia CF imba nhandare. Mestalla kwaakawona mitambo yakawanda semucheche uye akapupurira kusimuka, misungo uye kukunda kweSpanish klabhu.
Chokwadi ndechekuti vese baba vake naamai vake vaive vezera repakati avo vaigona kubhadhara matikiti emitambo ivo nevana. Semwana, Ferran aive hukama hwepedyo nemumwe wevabereki vake - kunyanya baba vake vane hushamwari.
Sangana nemumwe weVabereki vaFerran Torres- baba vake vakanyanya kupora (panguva yehudiki hwake mazuva).
Munzira iyoyo yemitambo, Ferran wechidiki akakura achimhanya semupengo weValencia uye aine zviroto zvekutamba kuLos Ches pamwe nekugamuchira basa raizomuendesa kure kuseri kwemahombekombe eSpain.
Iyo Untold Nhabvu Nhau:
Vabereki vaFerran Torres, panguva yaakange aine makore matanhatu ekuberekwa nemufaro vakaona kunyoreswa kwake kumasisitimu evechidiki eValencia kwaakatanga basa rekushingairira kuvaka mumakwikwi nhabvu.
Ferran achiri ikoko, akatanga kutevedzera mutambo wake mushure mekuverengeka kwenhabvu yemuno neyemunyika kusanganisira munhoroondo David Villa uyo aive nyeredzi mutambi weValencia panguva iyoyo.
Mufananidzo usingawanzoitika weiyo nhabvu prodigy kuzvisimudzira iye kuValencia's academy.
Makore Ekutanga muBhora:
Sezvinotarisirwa kumucheche ane chinzvimbo, Ferran akange asina nyaya nekukwira kuburikidza nehuwandu hwevechidiki veValencia system sezvo iye aive tariro yakajeka nemagadzirirwo ehunhu anotsanangura zvinoshamisa-vana.
Saka nekudaro, Ferran akawana mukana isingawanzo wekuita mari yake yekuchengetera zvinhu zveValencia paakanga achingova namakore gumi nematanhatu + mamwe mazuva ekubereka munaGunyana 16, mutsindo wakamuisa parutivi seumwe wekucherekedza nguva iri kure.
Ona uyo aive 16-makore-ekutanga paakatanga kutamba kumatura eValencia.
Ferran Torres Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Ferran fomu rakanaka uye kusachinjika pakupedzisira zvakamuona achiwana kukwidziridzwa kuValencia's B-divi pamberi pemushandirapamwe wa2017-18, budiriro yakaunza chishuwo chake chechikwata chekutanga padhuze nekuzadzikiswa.
Valencia akaziva chishuwo chaFerran uye haana kutambisa nguva kupinda muchivimbiso chekuwedzera chibvumirano nemukomana muna Gumiguru 2017 asati amusimudzira kuchikwata chekutanga chechikwata musi wa1 Ndira 2018.
Winger akawana yakawedzera kondirakiti yekuwedzera pamberi pekusimudzirwa kwasvika pamusuwo wake matanho mwedzi yakatevera.
Ferran Torres Biography Nhau - Simuka Mukurumbira:
Paakawana kukwidziridzwa kuchikwata chekutanga chaValencia, Ferran akaita zvakanaka kuratidza kukosha kwake nekuwana kutanga kukwira muCopa del Ray, La Liga nemitambo yeChampions League. Kwakave kwakadaro kwekutanga kukoshesa kuoneka kwakaunza mukurumbira pasuo rake.
Kutanga, winger akazove mutambi wekutanga akazvarwa muma2000s kubva kuzvikwata zveSpanish kunohwina mumakundano emakwikwi apo Valencia's yaive ne4-1 kukunda Lille munaNovember 2019. Iyo feat yakamuonawo achiva mudiki wevalencia zvibodzwa munhoroondo yemakwikwi.
Chekutanga pane zvakawanda: Ona kukwidziridzwa kwaFerran kwake kwekutanga mukombe weligi chinangwa.
Ferran Torres Anoda Hupenyu- Akaroora, Musikana kana Mukadzi?
Chero Winger anenge akareba uye akanaka saFerran anogona kuve akanaka nemukadzi kana zvakanyanya, asina musikana. Zvinoshamisa kuti, Ferran haana kuroora panguva yekunyora uye haana vanakomana kana vanasikana kunze kwemuchato.
Winger anonzwisisa kuti haadi kubatsirwa nemusikana (zvirinani zvakadaro) kuti aise zvinokoshesa pamberi pake kunyanya sezvo achigadzirirwa kutora mimwe mikana inotambirwa nhabvu yepamusoro-soro.
Hapana musikana parizvino uye anotaridzika kusurukirwa mune ino yakanaka pikicha.
Ferran Torres Hupenyu Hwemhuri:
Pamberi pezviitiko zvekukwira kunoshamisa kwaFerran uye hunyanzvi pane bhora imhuri inotsigira. Tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri dzaFerran Torres kutanga nevabereki vake.
Nezve Ferran Torres 'Baba naAmai:
Amai nababa vaFerran vanga vari vateveri vanofarira veValencia winger asati azvarwa. Vakaita zvakanaka kumuendesa kumitambo kuMastella kusanganisira isingakanganwike 2008 Copa del Ray yekupedzisira iyo yakakundwa naValencia. Vabereki vese vanozviita tsika yebasa kuenda kumitambo yaFerran uye vanogara vachimupa zvidzidzo nezvekudiwa kwekuzvininipisa nekuzvibata.
Kanda kumashure pikicha yaFerran Torres neyechipfuwo chake tsoko naamai.
Nezve Ferran Torres 'Vanun'una:
Ferran ane vanin'ina vaviri ivo vanosanganisira mukoma wake Arantxa uye mukoma mudiki anozivikanwa. Arantxa ari kupokana munhu wepedyo kumoyo waFerran uye muchengeti wenyaya dzehudiki hwake. Iye anoziva zvese nezve mukoma wake mudiki uye ivo vaviri vanogovana anchor tattoo patsoka dzavo. Iyo tatoo inoyeuchidza vaviri vacho kuti varege kurega chero chinhu ichivaremera.
Ferran Torres nemunun'una wake anodiwa Arantxa. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Nezve Ferran Torres 'Hama:
Kure kure nehupenyu hwemhuri hwaFerran Torres, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvemhuri yake midzi sezvo ichienderana nababa nasekuru vababa vake. Iko hakuna zvinyorwa zveababamunini vaFerran nasekuru vake apo muzukuru wake nevanin'ina vake vasati vazivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Izvi zvinoita senge yakangwara nzira yekushambira. Ferran haasi shasha here?
Wakanga uchiziva here kuti Ferran Torres ane saizi persona inoratidza hunhu hwevanhu vane chiratidzo chezodiac zvidimbu? Iye anozvininipisa, ane moyo wakanaka, anoshanda-nesimba uye anodisa.
Uye zvakare, Ferran haana matambudziko nekuburitsa chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwakavanzika uye hwega. Kana winger isiri pamunda wekutamba anogona kuwanikwa achiita zvinoverengeka zvezviitiko zvinozivikanwa kuve kwake kufarira uye kuita zvemitambo. Zvinosanganisira kufamba, kushambira uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Mabhazi ekumhanyisa emahara anoitirwa kufamba nevashandisi vakuru vezororo. Iyo winger ndeye yakakura spender.
Ngoro dzekumhanya dzakakwirisa mabhoti anoshandiswa kuitisa vafambi vashanyi vezororo. Iyo yekuhwina mutengesi mukuru. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Nezve mashandisiro anoita Ferran Torres uye kushandisa mari yake, mambure ake akakosha ari pamari inofungidzirwa yemamirioni 1.5 mamirioni ema Euro panguva yekunyora iyi bio. Kugovera hova kune hupfumi hwemhiko kunosanganisira mihoro uye mibairo yaanogamuchira yekutamba nhabvu-yechikwata chekutanga. Mukuwedzera mukusimbisa nemhando senge Adidas inoita zvakawanda kusimudzira mambure ake akakosha.
Nekuda kweizvozvo, Ferran haasi mutorwa kune mafaro ehupenyu anosanganisira kufamba mumugwagwa weSpain nemota dzekunze uye kugara mudzimba dzinodhura. Chii chimwe? Ferran anoshandisa muhombe pazororo nemapati zvakaoma chaizvo.
Ferran Torres Untold Chokwadi:
Vateveri venhabvu vanogona kuitarget Chokwadi, asi vanorangarira nyaya dzehudiki zvirinani. Ichi ndicho chikonzero muchikamu chekupedzisira cheFerran Torres Biography, isu tinokupa iwe zvishoma zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezve winger.
Chokwadi #1: Isu Takadzora Mubhadharo wake:
Kondirakiti yewinger neValencia CF inomuona achihwina muhoro weUS $ 40,000 pavhiki. Yakatsemurwa Ferran Torres 'muhoro muzvikamu zvidiki, isu tine zvinotevera.
TENURE / ZVINODZIDZA
Zvaanowana muEuro (€)
Kukwirisa Kwake muMapaundi (£)
Zvaanowana kuMadhora ($)
Chaanotambira Negore € 2,368,377.2 £ 2,085,600 $2,559,031
Chaanotambira Pamwedzi € 197,364.8 £ 173,800 $213,253
Izvo zvaanozvitambira Nevhiki € 45,898.8 £ 40,418 $49,593.6
Chaanotambira Nezuva € 6,556.9 £ 5,774 $7,084.8
Chaanogamuchira Hure Iga € 273.2 £ 240.6 $295.2
Chaanowana Maminitsi Ose € 4.6 £ 4.0 $4.9
Chaanowana Chepiri Chero € 0.08 £ 0.07 $0.08
Kubva zvawatanga kuona Ferran Torres Bio, izvi ndizvo zvaakawana.
Waizviziva here?… Wepakati murume muSpain anowana kutenderedza € 1.889 mwedzi waizoda kushanda kweinenge Makore 2 uye 1 mwedzi kuwana € 45,898.8 iyo ndiyo huwandu iyo Ferran Torres anowana mumwedzi (panguva yekunyora).
Chokwadi #2: Chii chinonzi Ferran Torres 'Chitendero:
Mhuri yaFerran Torres maKaturike uye vanozviita pane izvozvo. Muchokwadi, anotora kuzvipira kuMhandara Maria zvakakomba uye haamborega kuita chiratidzo chemuchinjikwa pese paanopinda munhandare yemakwikwi.
Anogona kuonwa pano achiisa maruva padhuze nemufananidzo weMhandara Maria.
Chokwadi #3: Ferran Torres 'Tattoo Chokwadi:
Sezvatakambotaura pakutanga, Ferran ane maratuni anoteedzera e-anchor pamwe nehanzvadzi yake yakura. Iyo hunyanzvi inoshanda yekuvayeuchidza kuti varege kupa chero chinhu kune icho chinogona kuvayera pasi. Mukuwedzera, Ferran ane zvishoma muchinjiso tattoo pachiuno chake.
Chokwadi #4: Ferran Torres 'FIFA Chokwadi:
Wakanga uchiziva here kuti Ferran Torres ine yakazara FIFA muyero ye78 panguva yekunyora? Zvisineyi, yaingangove nyaya yenguva pasati ya winger isinga zere kugona kwayo ye86 achifunga simba raanoisa mukutamba.
Chokwadi # 5: Nezve rake rekuzvarwa uye Zuva - 29th Kukadzi:
Torres akaberekwa pazuva 29th raFebruary. Saka nekudaro, anongopemberera zuva rake rekuzvarwa kamwechete pamakore mana.
Neraki, akaipemberera munaKukadzi 2020. Pamusoro pezvo, gore rake rekuzvarwa 2000 raive iro gore iro Ridley Scott "ndouya aikwanisa”Hit cinema. Waizviziva here kuti raivewo gore rakavhurwa magazini yakakurumbira yaOprah Winfrey? Iye zvino unoziva!
Zvimwe zvekuburitsa kwakakosha zvakaita kuti 2000 gore rirangarire.
Zita rizere: Ferran Torres García.
Akazvarwa: 29 Kukadzi 2000 (makore makumi maviri saApril 20).
Nzvimbo yekuzvarirwa: Foios, Spain.
Vabereki: Mr. naAmai García.
Vanun'una: Arantxa (hanzvadzi yakura) uye munun'una anozivikanwa.
Chitendero: Chikristu (Katurike).
kukwirira: 1.84 m (6 ft.
Weight: 77 makirogiramu.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Ferran Torres 'Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzike zvakanaka, ndokumbirawo ugovere nesu nekupindura pazasi. Tichagara tichikoshesa nekuremekedza mazano ako.
Valencia Nhabvu Diary
Ruben Dias Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
SUBSCRIBE KUNE LIFEBOGGER FOOTBALL STORIES!
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 12, 2020
Zuva rakashandurwa: Gumiguru 18, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Ndira 4, 2021
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 27, 2020
Jonjo Shelvey Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Robinho Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 3, 2020
Zuva rakashandurwa: Gumiguru 22, 2020
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 5, 2020
Zuva rakagadziridzwa: Mbudzi 4, 2020
Tora Nhabvu Nhau kuInbox yako.